Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada aan karantiil lahayn ee Singapore hadda leh Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Lufthansa iyo Singapore Airlines waxay si wadajir ah u bixin doonaan mid ka mid ah duulimaadyada Tallaalka Lane ee Tallaalka maalin kasta, ama Frankfurt ama Munich, laga bilaabo 16ka Sebtember.
Duulimaadyada maalinlaha ah laga bilaabo 16ka Sebtember iyada oo lala kaashanayo Singapore Airlines.
Gelitaanka karantiil-la'aanta ee Singapore kaliya haddii safarku ka bilowdo Jarmalka.
Ka -reebitaanka karantiilku wuxuu khuseeyaa duulimaadyo gaar ah, oo loo yaqaan duulimaadyada Tallaalka Tallaalka (VTL).
Gelitaanka Singapore ee Jarmalka si loogu safro dadka si buuxda loo tallaalay ayaa suuragal noqon doonta mar kale 8 -da Sebtembar. Karantiil hore loo soo rogay marka la gaaro Singapore mar dambe looma baahnaan doono. Jarmalku waa waddankii ugu horreeyay ee ay magaalo weyn oo ku taal Koonfur -bari Aasiya la saxeexato heshiis sidan oo kale ah.
Ka -reebitaanka karantiilku wuxuu khuseeyaa duulimaadyo gaar ah, oo loo yaqaan duulimaadyada Tallaalka Tallaalka (VTL). Lufthansa iyo Singapore Airlines waxay si wadajir ah u bixin doonaan mid ka mid ah duulimaadyadan VTL maalin kasta, midkood Frankfurt ama Munich, laga bilaabo 16ka Sebtember. Diiwaangelinta mar horeba waa suurtogal Macaamiisha ayaa sidoo kale awoodi doonta inay iska diiwaangeliyaan duullimaadyada VTL mareegaha dowladda Singapore laga bilaabo 1da Sebtember.
“Furitaanka Singapore ma aha oo kaliya inay u saamaxdo dadka inay soo booqdaan saaxiibbada iyo qoyska ama la kulmaan la -hawlgalayaasha ganacsiga, laakiin waxay sidoo kale u diraan farriin muhiim ah dalalka kale ee gobolka,” ayay tiri Elise Becker, Madaxa Iibka Lufthansa ee Asia-Pacific. “Aad bay uga muhiimsan tahay weligeed in waddamadu iska kaashadaan sidii xal loogu heli lahaa si loo soo celiyo socdaalka caalamiga ah ee hawada. Lufthansa iyo Singapore Airlines waxay gacan weyn ka geysanayaan horumarkan. ”
Tan iyo markii ay ku dhawaaqday dowladda Singapore, dalabka duullimaadyada u dhexeeya Jarmalka iyo Singapore ayaa saddex laabmay.
Shuruudaha soo socda ayaa u qalma socotada duulimaadka VTL ee Singapore:
Tallaal buuxa oo laga fuliyay Jarmalka ama Singapore iyada oo lagu qaatay Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna, ama tallaal kale oo WHO EUL ah.
joog Jarmalka iyo/ama Singapore ugu yaraan 21 maalmood oo xiriir ah ka hor intaadan u dhoofin Singapore. Socotada VTL ma aha inay haystaan ​​dhalashada Jarmalka.
tijaabada PCR-19 PCR oo leh natiijo taban oo la qaatay ugu badnaan 48 saacadood ka hor bixitaanka iyo tijaabada PCR labaad markii la yimid Singapore. Ilaa laga helo natiijada taban ee qoraalkan, musaafiriintu waa inay joogaan hoteelkooda gaarka ah ama hoyga Singapore. Iyada oo ku xidhan muddada safarka, ugu badnaan laba baaritaan PCR oo dheeri ah ayaa laga yaabaa in looga baahdo Singapore.
ballansashada duulimaadka duulimaadka VTL ee loogu talagalay.